भोकभोकै प्राणत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिऔं - Pura Samachar
भोकभोकै प्राणत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिऔं
अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गाउँमा छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अहिले भनेको जनतामा परिरहेको पीर मर्कालाई बुझनु पर्ने बेला हो ।
यति बेला जनता आपतमा छन । जनता आपत बिपतमा पर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुले ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो बेलामा जनताले दैनिकी कसरी चलाइरहेका छन् ? जनताको अवस्था कस्तो छ ? जनताको घरमा चुल्लो बलेको छ की छैन ? निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न नपाएर जनता भोक भोकै छन की के छन ? यी सवै कुराको ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । निषेधाज्ञाका कारण कोही जनता भोकले मरेको सुन्न नपरोस् । निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा देशभर भोकमरीको आवाज उठ्न थालेको छ ।
वैशाख दोस्रो साता देखि सुरु भएको निषेधाज्ञाले आम नागरिक समस्यामा छन । नागरिकले जोहो गरेको खाद्यान्न पनि सकिँदै छ । भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउँन सवै सचेत बन्नुपर्छ। अघिल्लो चरणको महामारीबाट पाठ सिकेर पूर्व तयारी गर्न अव ढिलाई गर्नु हुदैन । नागरिकलाई बाँच्नका लागी समयमा गाँस, बास र कपासको जरुरी हुन्छ । यस समस्याको समाधान तर्फ राज्यको ध्यान समयमै जाओस्। यति बेला सवै भन्दा बढी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने बर्ग समस्यामा छन । भोकबाट नागरिकलाई बचाउने योजना तीनै तहका सरकारले बनाउनु आवश्यक छ। जनता समस्यामा छन । यो अवस्थामा नागरिकलाई भोकवाट बचाँउनु पनि ठूलो मानव धर्म हुन्छ । पहिलो चरणको महामारी न्यून हुँदा केही दिन काम गरे पनि नागरिकले कमाएको पैसा बचाँउन सकेका थिएनन् । विषेशगरी दैनिक मजदुरी गर्नेको पहिचान गरी उनीहरूलाई रोगसँगै भोकबाट पनि जोगाउनु पर्छ। भाइरसको महामारी फैलिएको छ । यसले सृजना गर्ने हरेक समस्याको समाधान गर्ने तर्फ अव सवैको ध्यान जान जरुरी छ । भोकभोकै प्राणत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिऔं। राज्य र सरकार छ है भन्ने अनुभूति दिलाउन जरुरी छ ।
नेपालमा कृषि, उद्योग र सहरबजारमा ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको संख्या ठुलो छ। दिनमा काम नगरे साँझ–बिहान छाक टार्नै उनीहरुलाई धौधौ छ । उनीहरुलाई खानाको चिन्ताले सताउन थालेको छ। समग्रमा विपन्न परिवारलाई भाइरस, भय र भोकले एकैपटक थिचेको छ। मानिसलाई सबैभन्दा बढी डर भनेकै रोग र भोकको हो । यति बेला कोरोना महामारीले शोक पनि थपेको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर सुरु हुँदा गरिएको लकडाउनमा दैनिक राहत दिने काम हुन्थ्यो । चरण चरणमा तीन तहका सरकारसँगै संघसंस्था, व्यवसायी, दाता र व्यक्तिले मजदुरको पेट भर्ने काम गरेका थिए । दोस्रो लहरको लकडाउनमा राहत दिने काम सुस्ताएको जस्तो देखिन्छ । महामारीको दोस्रो चरणमा कोरोनाको कडा ‘भेरियन्ट’ आउँदा सबैको ध्यान भनेको यति बेला संक्रमणवाट कसरी जोगिने र कसरी जोगाउने भन्नेमै छ । बिरामीले अस्पतालका शैया भरिएका छन्। अहिले बिरामीलाई पहिलो आवश्यकता अक्सिजनको छ । यसको खोजीमा सबै क्षेत्रको ध्यान पनि गएको अवस्था छ । हो, हामी यति बेला बिपतमा छौं । यो बिपतलाई सवै मिलेर सामाना गरौं ।